Xildhibaan horey uga tirsanaan jiray Barlamaankii KMG oo lagu Dilay Muqdisho – Radio Daljir
Xildhibaan horey uga tirsanaan jiray Barlamaankii KMG oo lagu Dilay Muqdisho
Abriil 25, 2015 9:53 b 0
Sabti, Abriil 25, 2015 (Daljir) — Kooxo hubeysan ayaa maanta ku dilay Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho, xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii KMG-ka ahaa ee Somalia hore, iyadoo mas\_’uuliyadda dilka xildhibaankan hore ay sheegatay Xarakada Al-shabaab.
Xildhibaankan hore ee lagu dilay Suuqa Bakaaraha ayaa lagu magacaabi jiray, Xaaji Cali Aadan waxaana lagu dilay agagaarka Cabdalla Shideeye ee Suuqa Bakaaraha, iyadoo aan weli la ogeyn sababta loo dilay xildhibaanka ka tirsanaa baarlmaankii hore ee Soomaaliya.
Goob-jooge ku sugan goobta uu dilka xildhibaankan hore ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in marxuumka dhowr xabadood looga dhuftay qaybaha sare ee jirkiisa, iyadoo ay goobta gaareen ciidammo ka tirsan booliiska Soomaaliya.
“Dilka mas\_’uulkan waxaa geystay laba ruux oo bastoolado wata, waxaana toogashadu ay ka dhacay qaybta Cabdalla Shideeye ee Suuqa Bakaaraha, waxaana marxuumka la dilay lagu magacaabi jiray Xaaji Cali Aadan,” ayuu yiri goob-jooge halkaas ku sugnaa.
Ciidankii booliiska Somalia ka tirsanaa ee goobta gaaray ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen kooxihii geystay dilka xildhibaankii hore ee baarlamaankii KMG-ka ahaa Somalia ka tirsanaa.
Midowga Yurub oo Soomaaliya ka taageeraya tayaynta laamaha Socdaalka
RW Cumar oo ka warbixiyay xaaladda Qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya